ရတနာ သုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်လာသူ တစ်ယောက်အကြောင်း
စာအုပ်အကြောင်းကတော့ အထွေအထူး ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ နာမည်ကြားတာနဲ့ ထပ်ဖတ်ချင်မဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်၊ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ Internet ပေါ်မှာ ရှာနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ တနေ့ကမှ တွေ့လို့ Download ချထားဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း Scan ဖတ်တင်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ဘယ်သူမှန်း မသိပေမဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ မူရင်း စာအုပ်ကို တိုက်ရိုက် Scan ဖတ်ထားတဲ့ အတွက် File Size ကတော့ အတော်လေး ကြီးပါတယ်။
Download ချရတာ ခက်ခဲမယ်၊ ကြံ့ကြာမယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်လေး ပေးခဲ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Email နဲ့ လိုချင်တယ် ဆိုရင်လည်း Cboxမှာ တစ်ခုခု ပြောခဲ့ဗျာ။
Download from Fileden. or Download From 4Shared.
Filed Under : Download, Ebook
Download မရပါ ခင်ဗျာ။ Fail ဖြစ်နေပါတယ်..... ကိုကိုမောင်လူအေးရေ...
4Shared ကနေ Download မရတဲ့ သူများ ထပ်ကြိုးစား ကြည့်နိုင်အောင် Fileden မှာ ထပ်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ထပ် Try ကြည့်ပေးပါဦး။
download ယူသွားတယ်။ file share လိုက်တာ ကျေးဇူးပဲ။
ကိုကိုမောင်လူအေးရေ... Fileden ကနေ Download ယူသွားပါတယ်။
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျေးဇူးဗျို့ ကိုလူအေး. အဆင်သင့်တယ်ဗျာ. စာအုပ်ကို သူများဆီက ငှားငှားဖတ်နေရတာ ကြာတော့ အားနာလာလို့ဗျို့။ ဒီမှာကျတော့လည်း စာအုပ်က ဝယ်ဖို့ မလွယ်ဖြစ်နေတာနဲ့.။ အခုတော့ အားလုံး အိုကေပြီဗျို့.. သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ။ :)
ကိုလူအေးရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ စကန်ဖတ်ပေးတဲ့လူကိုလဲ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်အရမ်းကောင်းတာဗျ။ ပြန်ဖတ်ချင်နေတာကြာပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ပေးဖတ်ချင်နေတာ။ pdf version မရှိသေးဘူးထင်တယ်။ အချိန်ရရင်တော့ typing ရိုက်ချင်သား။
စာရေးသူက အတွဲ ၅ နဲ့ ၆ ကို ဆက်ရေးဖို့ စီစဉ် ထားတာ ရေးဖြစ် မရေးဖြစ် သိပါရစေ။
Anonymous ရေ... အဲဒါတော့ ကျွန်တော်လည်း မဆက်စပ်မိတော့ မသိသေးဘူးဗျ.... နောက်ထပ် Update သတင်းလေး ရရင်တော့ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်... :)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုလူအေး။ ခုနကမှား သွားတယ်ဗျာ။ စာရေးသူက အတွဲ ၅-၈ ထိ ရေးသားရန် အသင့် စီစဉ်ထားပြီး လို့ ပြောထားတာ။ ကျွန်တော်က ၅-၆ လို့ ရေးမိတယ်။ Update သတင်းရရင် ထပ်တင်ပေးပါဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ... Anonymous ဗျာ... Update သတင်းရရင် တင်ပေးပါ့မယ်... ဂရုတစိုက် မှတ်ချက်ပြုတာရော.... အချိန်ပေး လာရောက် လည်ပတ် တာရော ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ... :)
စာရေးသူက အတွဲ ၅-၆ လို့မရေးပါခင်ဗျား
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ညဏ်လမ်းပေါ်လျှောက် လူတစ်ယောက်အကြောင်းဆိုပြီး
ဆက်ရေးသွားပါတယ်.. ၁ မှ ၄ အထိ ဖတ်ဖူးသူများ မဖတ်မဖြစ် ဖတ်သင့်ပါတယ်
ခင်ဗျား.. စာရေးသူလည်း ကိုယ်တိုင်း ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပြီး
တရားစခန်းကြီးကို အောင်အာင်မြင်မြင် နဲ့ ဟောကြား ပြသပေးသွားခဲ့ပါတယ်..
ပဲခူး.. မကွေး.. တောင်ငူ အစရှိတဲ့ နေရာတွေမှာပါ... အဲဒီအတွက် ရေးထားတဲ့
စာအုပ်တွေ တိတ်ခွေတွေဟားလည်း အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ..ဗုဒ¨ဘာသာဝင်းများအတွက် ပထမ ထွက်ရပ်လမ်းဆိုပြီး..တရားပွဲမှာ ဟောထားတာတွေကို.. စာအုပ်အနေနဲ့ ထုတ်ဝေသွားပါတယ်.. ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ... ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားပါပြီ..
spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality however I
Also visit my website ... friendshareinc.com
switch the light on for me as far as this issue goes. Nonetheless there is just one position I am not too comfy with
so whilst I make an effort to reconcile that with the actual core theme of your position, allow me see what the
Look at my site ... http://share-commission.com/index.php?p=blogs/viewstory/572688
Havealook at my web blog: Website.Kamsgraphics.com